जान्नै पर्ने कुरा। ह’स्त’मै’थु’न गर्नुका सात फाइदाहरु के के हुन् ? पुरा पड्नुहोस
बिहिबार, साउन २१, २०७८ १०:२२
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। ह’स्तमै’थुनका बारेमा मानिसहरुको विभिन्न धारणा छ । कोही यसलाई अ’श्लील उ’त्तेजित व्यवहार ठान्छन् भने कोही यसलाई सही ठा’न्छन् । तर विज्ञानले भने ह’स्तमै’थुनलाई ग’लत मान्दैन र यसलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो र सामान्य मान्छ
। ह’स्तमै’थुनको दौ’रानमा मानिस आफ्नो दिमागमा सु’न्दर पलहरुको कल्पना गर्छ र त्यसकै बारेमा सोच्न थाल्छ । ह’स्तमै’थुन कुनै पनि कोणबाट ग’लत नभएको अध्ययनहरुले पुष्टि गरिसकेको छ।यसलाई केटा र केटी दुबैले अभ्यास गर्नसक्छन् ।
केटाहरुमा यसको अभ्यास गर्ने इच्छा १७ वर्षपछि प्र’वल रुपमा उ’त्पन्न हुन्छ । तर केही मानिसहरु भने यसको अभ्यास गर्दैनन् र जबसम्म कसैमा यसको इच्छा विकास हुँदैन तबसम्म यसको अभ्यास नगर्दा उचित हुन्छ ।
ह’स्तमै’थुन गर्नाले तपाईको शा’रीरिक विकासमा कुनैपनि अ’वरोध उत्पन्न गर्दैन । यसको अभ्यासले आखाँको मुनि ‘डार्क सर्कल’ बस्ने सम्भावना कम हुन्छ ।हेर्नुहोस् ह’स्तमै’थुनको अन्य ७ फाइदाहरु:-
१. त’नाव घटाउँछ: ह’स्तमै’थुनका क्रममा व्यक्तिको मु’टुको ध’ड्कन र श्वा’सप्रश्वास ती’व्र बन्छ । यसले गर्दा र’क्तसञ्चार ती’व्र हुन्छ भने मां’सपेशी पनि क्रियाशील हुन्छ । यसबाट श’रीरमा भएका मा’नसिक तथा शा’रिरीक त’नावले नि’कास पाउने गर्छ ।
२. सु’रक्षित क्रि’या: यौ’न रो’ग ला’गेको व्यक्ति, ग’र्भवती महिला अथवा से’क्स गर्न न’मिल्ने रो’ग लागेका मानिसले पनि ह’स्तमै’थुनबाट शा’रीरिक तथा मा’नसिक स’न्तुष्टि पाउन सक्छन् ।
के तपाई कानमा तेल हाल्नुहुन्छ ? यी कुरा अवश्य ध्यान दिनुहोस्, नत्र…